Jawaabaha waxay Bilaabeen inay Yimaadaan Isticmaalayaasha Dhagax-jabka ee kuxiran iPhone | Wararka IPhone
Dhagax dixeed sida Android Wear nama ogolayaan inaan is dhexgal ku sameyno labada jiho marka aan heysano qalabka ku xiran iPhone, halka Apple Watch aan sameyn karno iyadoon xaddidneyn. Iyada oo Apple Watch aan ka jawaabi karno farriimaha, wicitaanada, emaylka, la falgalno jadwalka si dib loogu dhigo ballamaha ama loo abuuro ...
Xaddidaadda laga helayo Pebble iyo Android Wear waxaa aasaasay shirkadda Apple, sida muuqata waana shaki weyn ka qabaa inay waligeed ka saarto. Halka in la isku dayo in saacadaha loo yaqaan 'Pebble' la siiyo saacado badan, shirkaddu waxay heshiis la gashay AT&T si ay awood ugu yeelato inay ka jawaabto farriimaha laga helay barmaamijka. Laakiin maahan in wax walba ay noqdaan kuwo jilicsan, maxaa yeelay adeegan cusub ayaa sidoo kale leh xaddidaadyadiisa.
In la bilaabo adeegani waa uun ku xaddidan isticmaaleyaasha qandaraaska shirkadda AT&T aan ansax ku ahayn dadka isticmaala kaarka. Marka labaad, moodooyinka taageeraya shaqadan cusub ayaa ah moodooyinka Waqtiga Dhagax-jabka, Birta Xajmiga iyo Waqtiga Wareega. Xaddidaadda ugu dambeysa waa farriimaha aan ka jawaabno farriimaha kama muuqan doonaan arjiga ee iPhone-ka. Laga soo bilaabo Pebble waxay xaqiijinayaan inay la xaajoonayaan shirkadaha kale si ay awood ugu yeeshaan inay adeegga ugu fidiyaan isticmaaleyaal badan.
Haddii aad tahay isticmaale AT&T oo aad rabto inaad iska hubiso haddii aad horeba jawaabaha ugu isticmaali kartid wadaha waa inaad u socotaa sida soo socota:
Marka xigta waa inaan hubinaa in nooca firmware-ka ee Pebble-keena uu yahay 3.7 ama ka sareeya.
Marka xigta waa inaan raacnaa tilmaamaha ka muuqda shaashadda. Marka aan habaynno jawaabaha, waxaan ka jawaabi karnaa dhammaan fariimaha aan ku helno amarrada codka ama liiska jawaabaha horay loo sii cayimay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Tartanka » Jawaabaha waxay bilaabayaan inay u yimaadaan isticmaalayaasha Pebble ee ku xiran iPhone-ka
Su'aashu waxay tahay, natiijooyinka dhaqdhaqaaqa jirka ayaa ka muuqda barnaamijka caafimaadka ee iOS?!
Miyaad aragtay Ukunta Easter ee Google ee Dagaalkii Xiddigaha?